Nepal Deep | तपाई साउदी जादै हुनुन्छ? साउदी सरकारले जारी गर्यो नयाँ नियम
तपाई साउदी जादै हुनुन्छ? साउदी सरकारले जारी गर्यो नयाँ नियम
काठमाडौँ। कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि साउदी सरकारले आफ्नो देश प्रवेश गर्ने यात्रुका लागि नयाँ नियम जारी गरेको छ ।
साउदी सरकारले २४ मेदेखि लागू हुने गरी आफ्नो देशमा प्रवेश गर्ने यात्रुका लागि नयाँ नियम जारी गरेको हो ।
साउदी प्रवेश गर्दा ८ वर्षभन्दा माथिका सबैले पीसीआर परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट बोकेको या कोरोना विरुद्धको खोप दुवै डोज पूरा गरिसकेको आधिकारिक प्रमाण साथमा राखेको हुनुपर्नेछ । पीसीआर परीक्षण नेगेटिभ रिपोर्ट ७२ घण्टा भित्रको हुनुपर्नेछ ।
साउदीको अकामा भएका व्यक्तिले भने साउदी यात्रा गनुपूर्व स्वास्थ्य बिमा गनुपर्ने छैन ।
तर भिजिट भिसामा साउदी जानेले भने कोरोना सङ्क्रमणको उपचारसमेत कभर गर्ने किसिमको स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्नेछ । यस्तो बिमा कोरोनाको सङ्क्रमण उपचार क्लिनिक वा अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च र १४ दिनको संस्थागत क्वरेण्टीन खर्चसमेत व्यहाेर्ने खालको हुनपर्छ ।
साउदी अरेबिया प्रवेश गर्ने सबै विदेशी नागरिकले साउदी पुगेपछि अनिवार्य ७ दिनको संस्थागत क्वरेण्टीन बस्नुपर्नेछ । तर दुवै डोज खोप लगाएकाहरूले भने क्वरेण्टीनमा बस्न पर्ने छैन । साउदीले संस्थागत क्वरेण्टीनको व्यवस्था यात्रु प्रवेश गरेको सहरमा नै व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
संस्थागत क्वरेण्टीन बसेको समयमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएमा क्वरेण्टीनको १० देखि १४ दिन सम्मको पनि हुन्छ ।
साउदीको अकामा भएका व्यक्ति साउदी प्रवेश गरेपछि संस्थागत क्वरेण्टीमा बस्दा बस्दै सङ्क्रमण भएर उपचार गर्नु परेमा सबै खर्च साउदी सरकारले नै गर्नेछ । तर भिजिट भिसामा साउदी गएका विदेशी नागरिकको हकमा भने व्यक्तिले गरेको स्वास्थ्य बिमाले नै कभर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि कसैले साउदी सरकारले जारी गरेको एकान्तवास तथा क्वरेण्टीनसम्बन्धि नियमको उलङ्घन गरेमा पुनः साउदी अरबमा आउन नपाउने गरी फिर्ता गर्ने साउदी सरकारले जनाएको छ ।